BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/31/2012 12:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၄ မှာ သမ္မတ ဖြစ်မယ်”လို့ စံဇာဏီဘိုဟောကိန်းထုတ်သည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/31/2012 12:28:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နာရေးရှင် ခံစားနေရသော ပူဆွေးသောက ဝေဒနာတို့ကို ဖေးမကူညီရန် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု (Miss Interational 2012) နန်းခင်ဇေယျာသည် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၃/က)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်သို့ နာရေးကိစ္စများအားကူညီရန် ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရင်ဖုန်းအင်္ကျီအဖြူနှင့် လုံချည်အနက်အား ဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဧည့်အသင်းသူ/
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/30/2012 07:02:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
(12-10-2012)နေ့ ကသတင်းဟောင်းလေးတစ်ခုပါ....ခုတော့ ရရှိမရှိမသိဘူးခင်ဗျာ..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/29/2012 07:13:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လွန်ခဲ့ သောတစ်ပါတ်က ကျနော့် ထံ မေးလ်တွေအဆက်မပြတ်ရောက်လာရာ ဖြေသင့် တာဖြေ မဖြေချင်တာလည်း ဒလိလုပ်ယင်းးး
အဲဒီအထဲမှာ ဆက်တိုက်ကြီး ခနခနလာမေးနေတဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ဟာ...
ကိုဂေါ်လီ မှုန့် ဟင်းခါးချက်နည်း ရေးတင်ပါတဲ့ .....
တိန်...ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘီး -မယ်တီလှချင်နဲ့ မိတ်ကတ်-သတင်းစာတင်တဲ့ဘလောက်ဂါနဲ့ မြောင်းတူးကုလားဖြစ်နေပြီ....မသိပါဘူးဆိုနေမှ
နောက်ပြီးဘာငါးနဲ့ ချက်လို့ရသလည်းတဲ့ ....ကျုပ်လည်းစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်
ဝေလငါးမကလို့ ၊လူသား၊ခွေးသား၊ကြောင်သား။ငပူဒို။ငါးရှဉ်။မြွေ။ဖား။လိပ့် နဲ့ပဲချက်ချက်၊နည်းစနစ်မှန်ယင်
ဒီတော့ ကျုပ်ကလည်း ချက်တပ်ဘို့ နေသာသာ ။ထ္မင်းတောင် ခနခနဆိုင်ဝယ်စားနေတဲ့ လူဆိုတော့့...
ကျုပ်အွန်လိုင်းမှာလိုက်ရှာကြည့် တာ....မဝတ်ရည်ရဲ့ ချက်နည်းတွေ့ လို့ 
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/28/2012 07:09:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/27/2012 09:39:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Written by ကိုအောင်ချမ်းမြေ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/27/2012 08:51:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နောက်နေ့ မှသတင်းဆက်တင်မယ်နော်...သယ်ရင်းတို့ 
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/26/2012 09:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကမ္ဘာမှာ အိုင်တီနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ မြန်မာပြည်ကလည်း နောက်ကချန်မနေဘဲ အမီလိုက်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/24/2012 10:16:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ရန် အရပ် ၁၄ လက်မ ပိုရှည်အောင် ခွဲစိတ် ကုသခဲ့သည့် လူပု သတို့သမီး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မန်ဆာ ချူးဆက်ပြည်နယ်မှ ခြေထောက်နှင့် လက်သာ မန်ထက် ပိုတိုနေသော အမျိုး သမီး တစ်ဦးသည် အရပ်ပိုမို ရှည်ထွက် လာစေရန် ခွဲစိတ် မှုနှစ်ကြိမ်ပြု လုပ်ခဲ့ပြီး နောက် အရပ် ၁၄ လက်မ ပိုရှည် ထွက် လာကာ သူမ၏ ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ပွဲ ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူမသည် ခြေလက် အင်္ဂါများကို ခွဲစိတ်သည့် ပထမဆုံး သူဖြစ်ကြောင်း သူမအား ခွဲစိတ်ပေးသည့် ဆရာ ဝန် များ က ပြောကြား ခဲ့သည်။ သူမသည် အသက် ၈ နှစ်အရွယ်က ခြေထောက်များ ရှည်ထွက် လာစေရန် အတွက် ခြေသလုံး ရိုးအား ချိုးပြီး အရိုးများ ရှည် ထွက်စေရေး အနာခံ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ အရိုး သည် ပထမအကြိမ် ခွဲစိတ်စဉ် ၁ဝ စင်တီမီတာ ရှည်ထွက်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် တွင် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံခွဲစိတ်၍ အရိုးများကို ဆန့်ထုတ်ခဲ့ရာ ၂၅ စင်တီမီတာ ရှည်ထွက်လာခဲ့သည်။
နှစ်ကြိမ် ခွဲစိတ်ပြီး အရပ်ရှည်ထွက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် အပြင်း အထန် နာကျင်မှု၊ အခန့်မသင့်လျှင် မသန် မစွမ်း ဘဝသို့ ရောက်ရှိနိုင် သည်ကိုမမှုဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ် သည့် တစ်ဖနီ ဒီဒိုနာ တိုသည် ဆန်းသစ်သော သူမ၏ ခွဲစိတ်ကုသမှု အကြောင်းကို Daily Mail သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမသည် အရပ်အနည်းငယ် ပိုရှည်ခဲ့ သော်လည်း သူမအတွက် ထိုအရာမှာ မလွယ်ကူကြောင်း၊ အိပ်ရာ ထတိုင်း နာကျင်မှုကို ဆိုးရွားစွာ ခံစားရလေ့ရှိ ကြောင်း တစ်ဖနီက ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမ သည် ၎င်း၏ ချစ်သူ မရိန်း တပ် သားနှင့် လက်ထပ်ပြီး သားတစ်ယောက် ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သူမ၏ ပြင်းပြသော ဆန္ဒဖြင့် အရပ်ရှည်ထွက်အောင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာ ယ် များကို သူမ၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင် ခဲ့သည်မှာ အံ့သြ ဖွယ် ရာပင်ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/24/2012 05:59:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/24/2012 05:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ကားတင်သွင်းရာတွင် လျှောက်ထားရမည့် ကား CIF ဈေးနှုန်းသစ်များထုတ်ပြန် ယဉ်ကြောဆိုးရွားစွာ ကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် လမ်းတိုးချဲ့မှု အဆင်သင့်မဖြစ်မီ ကာလအတွင်း လမ်းဧရိယာနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကားအစီးရေကိုသာ နှစ်စဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် စတင်စီစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဦးထောင်ဘိုအ၀ိုင်းတွင် ယာဉ်ကြောကြပ်နေမှုကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကားတင်သွင်းသူများ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အသုံးပြုရမည့် မော်တော်ယာဉ် CIF ဈေးနှုန်းများကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/23/2012 08:34:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Written by ၀င်းနိုင်ထွန်း
ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း လူသုံးကုန် အများအပြားသည် အလုပ်သမားများအပေါ် ကျွန်ပြုခိုင်းစေခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ ထွက်ကုန်များဖြစ်ကြသည်။ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် နိုင်ခြင်းမရှိသည့် အနေအထားဖြစ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးရသည့် အနိမ့်ဆုံး အောက်ခြေအဆင့်မျိုးများတွင် အလုပ်သမားများအပေါ် အလွဲသုံးစားပြုမူမှုမျိုးများ ရှိကြသည်။ မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများတွင် အလုပ်သမားများကို ကျွန်ပြု ထုတ်လုပ်သည့် လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းများမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ပင်လယ်အစားအစာ ထုပ်ပိုးသည့်လုပ်ငန်းများ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ချောကလက် လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/22/2012 06:06:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Heavy metals and health သတ္တုလေး (heavy metals) တွေရဲ့ အဆိပ်သင့်မှု
''ဆရာ ကိုဘသစ်ခင်ဗျား၊ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ် ပြန်သွားတာရှိတယ်။အဲဒါကတော့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အက်ဆစ်ထိမိပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကြောင်း သံသယရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးဦးကို ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံက စုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။အဲဒီ ကလေးထဲက သုံးဦးကတော့ သူငယ်နာအကြောနဲ့ ကြွက်သား အားနည်းရောဂါ (Cerebral Palsy) ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးကတော့ ဦးနှောက်အကျိတ် (braintumour) ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီလို စစ်ဆေးလိုက်တော့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/22/2012 05:58:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စိန်ခေါ်မှုများ၊ အလားအလာများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာ့မူဝါဒ
Written by ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်း
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဆိပ်ကမ်းသစ် တိုးချဲ့ရန် ပိုင်တိုင်များကို
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲများ လမ်းကြောင်းမှန်ရေးတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ပြည်တွင်းတွင် သေနတ်သံများ ဆိတ်သုဉ်းရေး၊ ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသားတစ်ဦးမျ မရှိရေးတို့သည် အရေးကြီးသည့်အလျောက် အိမ်နီးချင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ လတ်တလော စိန်ခေါ်မှုများကို နှစ်နိုင်ငံစလုံးက နည်းလမ်းတကျ ချဉ်းကပ် အဖြေရှာပြီး ရေရှည်အမြင်အပေါ် အခြေခံသည့် သူနိုင်ကိုယ်နိုင် မူဝါဒတစ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် အခြေခံအားဖြင့် မဟာဗျူဟာ အကျိုးစီးပွားသုံးရပ်ပေါ် အခြေခံလျက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသည်။ အဆိုပါ မဟာဗျူဟာ အကျိုးစီးပွားသုံးရပ်မှာ စွမ်းအင်ဝယ်ယူရေးနှင့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေး၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ လမ်းပွင့်ရေးနှင့် နယ်ခြားဒေသလုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတို့ ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/22/2012 05:51:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ရောင်စုံခြယ် မီးရောင်အောက် တွင် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ ပျော်ရွှင် ယစ်မူးစွာ ကခုန်နေကြသည်။ မြူးကြွကြွရက်ပ် သီချင်း အင်္ဂလိပ် စာသားကို ကခုန်ရင်း ပြိုင်တူဟစ် လိုက် သေးသည်။ စကပ်တိုတို၊ အင်္ကျီကျပ်ကျပ် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးများမှာလည်း သီချင်း သံနှင့် အပြိုင် စည်းဝါးညီညီကနေကြသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/22/2012 05:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အဲဒီ (၁၀) ချက်က မြန်မာ နိုင်ငံမှာပဲ ရှိတာ ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/19/2012 05:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား?
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/18/2012 08:07:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကြံကြံဖန်ဖန်အဖေနဲ့ သမီးပြန်ယူပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်
တို့ အများအားကျ အတုယူ ပြောနေကြ
သည့် အနောက်နိုင်ငံတွင် အဖေနဲ့သမီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/18/2012 07:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ကြိမ်တောမြောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင် ကျေးရွာရှိ သိမ်ကျောင်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ အာဒိစ္စ၀ံသ၊ သက်တော် (၉၅) နှစ်၊ ၀ါတော် ၇၅ ၀ါသည် ပျံလွန်တော်မူသွားသည်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရက်ပေါင်း ၄၆ ရက် ရှိလာသော်လည်း ရုပ်ကလာပ်မှာ ပုပ်ပွပျက်စီးခြင်း မရှိဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ကျောက်ဖြစ်သွား သကဲ့သို့ ရုပ်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆရာတော်ဘုရာကြီးသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၁ ရက် သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် ၁ ရက် နေ့ညနေ ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် တောင်ငူမြို့
ကေတုအထူးကုဆေးခန်းတွင် ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပြီး ရုပ်ကလာပ်အား သီတင်းသုံးတော်မူရာ သိမ်ကျောင်းတိုက်တွင် ထားရှိပါ သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/17/2012 06:02:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၇ ရက်နေ့က ပြန်လည် ဖော်ယူခဲ့ပြီး အဆိပ်မိခဲ့ခြင်းရှိ မရှိ စမ်းသပ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများက န
မူနာ များစတင်ရယူနေပြီဟု ပါလက်စတိုင်း သတင်းရင်းမြစ်များက အေအက်ဖ်ပီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2012 05:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လောကကြီးမှာ အထူးအဆန်းတွေတော်တော် များလာတယ် ပြောရမလားပါဘဲ။ ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ သတင်းဗီဒီယို မှတ်တမ်း တခုကိုကြည့်လိုက်တော့ အံ့သြခဲ့ရပေမယ့် ဘ၀ဟာ တခါ တရံ ပြောင်း
ပြန်တွေက အတည့်ဖြစ်တာလည်း ရှိတယ်လို့ ယူဆမိလိုက်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/15/2012 04:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2012 07:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လူသေပြုစုပွဲ (Ma' Nene festival) ကျင်းပနေမှုအား ယခုကဲ့သို့ တွေ့မြင်ရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2012 07:42:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ခင်းဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ လူဆိုတာဒါပဲ မှတ်ထားကြပါ
ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်သူများ နှင့် တရားကိုလက်ဆိုင်ဆုပ်ထားသူများဖတ်ကြပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2012 07:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၊ လူကြီး(၁၃)ဦး ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့ ဖရဲသီးနှင့်လျှက်ဆား
“ အပင်စိုက်ပျိုးစဉ်ကာလတုန်းက အလွန်အကျွံသုံးစွဲထားတဲ့ ဓာတုဆေးဝါးတွေကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကြိုး တစ်ရပ်အဖြစ် ရရှိတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖရဲသီးနဲ့ လျှက်ဆားတွဲဘက်၍ စားသင့်မစားသင့်ဆိုတာကိုတော့ စီစစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ကျန်းမာရေးကွန်ယက်မှ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2012 06:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သူလမ်းရောင်နေစဉ် ရုတ်တရက်ဘဲ မျက်စိမှာ ကျိန်းစပ်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်....
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/14/2012 06:12:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တရုတ် နိုင်ငံ မှ ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထား သည့် ၀ ပြည်လွတ်လပ် ရေး တပ် မတော် ၊
တရုတ် နိုင်ငံ မှ ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထား သည့် ၀ ပြည်လွတ်လပ်
ရေး တပ် မတော် ၊ ၀ ပြည် ခေါင်း ဆောင် များ ၏ ဆွေ မျိုးသားချင်း များ
ကို မြန်မာ အစိုးရ ၏ လူဝင် မှုကြီး ကြ ပ် ရေး ဌာန က သိန်းပေါင်း ထောင်
ချီ လာဘ်သပ် ပကာ ရယူက နိုင်ငံ သ
ံ သက်သေခံ ကဒ် ပြား ထုတ် ပေးခဲ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2012 08:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အကြိုက်လွန်သွားပြီ... Disco ခေတ်ဦးလို ဖြစ်နေပြီပေါ့ ဒစ်စကိုကလည်း ကလို့အလွန်ကောင်းကို ဒီGangnam Styleက ကလို့ကောင်းတာကို အဲ့တော့ ဖြစ်ရပြီးပေါ့ .......Gangnam Style အကကို အပြင်းအထန် ကခုန်ရင်း ဗြိတိန်သားတစ်ဦး သေဆုံး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2012 08:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တရုတ်အပေါ် ပြည်သူတွေ ဘာ့ကြောင့် အမြင်မကြည်ရတာလဲ ?
တရုတ်နဲ့ မြန်မာဆက်ဆံရေး သမိုင်းအကျဉ်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံဟာ လူဦးရေ သန်း ၁ ထောင် ကျော် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ၁၉၅၀ လောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ စားစရာမရှိလောက်အောင် အငတ်ဘေးကြီး ၂ ခါကြုံခဲ့ရစဉ်ကာလက တရုတ်ပြည်မက တရုတ်နွယ်ဖွားများ နဲ့ မြန်မာနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ ယူနန်တရုတ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀င်ရောက် နေထိုင် ခဲ့ကြရာ မှ မြန်မာပြည်တရုတ်နွယ်ဖွားတွေ တိုးပွားလာခဲ့ရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/13/2012 07:45:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးအတွက် Nike မှထုတ်သော သားရေကွင်း (Nike+ FuelBand)
ယခုနှစ် ဧပြီလက စတင်လို့ ကမ္ဘာတစ်လွှားကို ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေး ထိန်း ပစ္စည်း -သရေကွင်း- Nike+ FuelBand ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာပြည် မှာ ခေတ်မစားပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာတော့ အရောင်းသွက်တဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/12/2012 07:48:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဟင်းလျှာအဖြစ်ချက်စား ဆေးဖက်ဝင်သလားမမေးနဲ့ရုံးပတီသီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/12/2012 07:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမည်ကတော့ ခရစ်စမတ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လူအရေအတွက် ထက် ဂဏန်းအရေအတွက် ပိုများနေတဲ့အတွက် ဂဏန်းနီ ကျွန်း (red crab island) လို့တောင် တင်စား ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/12/2012 07:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကွမ်းခြံတစ်ခုအတွင်းရှိ ကိုယ်ဝန် ၇ လ ဆောင်ထားသူ အသက် ၂၄ နှုစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလောင်း တွေ့ ရှိ
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ် ဇရစ်ချောင်ကျေးရွာရှိ အမည်မသိကွမ်းခြံတစ်ခုအတွင်းရှိ ရေတွင်းပျက်ထဲ၌(၄-၁၂-၂၀၁၂)တွင် လူသေအလောင်းတစ်လောင်းအားတွေ့ ရှိကြောင်း သတင်းအရ သထုံမြို့နယ်
တွဲဘက်တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်နွယ်၊သထုံဆေးရုံမှာ ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးမောင်၊ သထုံရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သထုံရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ညွှန့်ဝင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေများနှင့်အတူ အခင်းဖြစ်ပွားရာ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ၄င်းနှင့်အတူ မွေးကင်းစ ကလေးငယ် အလောင်းပါတွေ့ရှိသဖြင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/12/2012 03:15:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြောက်ကိုရီးယား ဒုံကျည်လွှတ်တင်မှု နိုင်ငံတကာကို အံသြစေေ လာက်အောင် အောင်မြင်ခဲ့
၁၂-၁၂-၂၀၁၂ နေ့တွင် မြောက်ကိုရီးယားက နှောင့်နှေးမည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသော တာဝေးပစ်ရော့ကတ်ကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါကျွန်းပေါ်ကျော်ပြီး ပစ်လွှတ်ခဲ့သော ရော့ကတ် လွှတ်တင်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဂြိုဟ်တုတစ်လုံးကို အာကာသအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား ဘက်က ကြေညာခဲ့သည်။ တာဝေးပစ်ရော့ကတ်လွှတ်တင်မှုသည် တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်နည်းပညာ စမ်းသပ်မှုကို တဖက်လှည့်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဟု နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယူဆထားပြီး ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရမှ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/12/2012 03:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဂေါ်ရခါးသီး ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးသက်သက် သာသာနဲ့ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာ ဆိုရင် ဆောင်းရာသီမှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံး တောင်ပုံရာပုံနဲ့ ပေါများလှပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာတော့ (sugar ) ဆူကာသီးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်တိုင်းမှာ လိုလို စင်တင်ပြီး စိုက်ထားကြပါတယ်။ စားချင်တဲ့ အချိန်မှ သွားခူးစားကြမျိုးပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/11/2012 07:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှာလကာရည်ဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းသစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆရာဝန်များက ရှာလကာရည်ကို အသုံးပြုထားသော သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ ရှိ မရှိ စမ်းသပ်ရန် နည်းလမ်းသစ် တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များကို သားအိမ်အတွင်းမှ ခြစ်ယူ၍ စမ်းသပ်ရခြင်းဖြစ်ရာ ထိုစစ်ဆေး စမ်းသပ်မှုမှာ ငွေကုန်ကြေးကျမ
ျားပြားပြီး အထူးပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာများလည်း လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယ ဆရာဝန်များ၏ ယခုတွေ့ရှိသော ရှာလကာရည် အသုံးပြု နည်းလမ်းသစ်မှာ အထောက်အကူ ပြုလာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/10/2012 07:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှားပါးသောမြန်မာ့ ယာဉ်ကျေးမှု့ များ(၁)
ဗမာ့ မင်သေ့ (ခ) ဆေးမင်ကြောင်
ရှေ့ သို့ ဆက်လက်ဖတ်ရန်ပါအုန်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/10/2012 05:12:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်မြို့မြေပုံ ၁၉၁၂ ခုနှစ်
ပုံကြီးကြည့် ရန်အတွက်ပုံကိုမောက်ဖြင့်ကလစ်လိုက်ပြီး ကီးဘုတ်မှ ctrlကိုဖိ၍ + သို့ _သင်္ကေတကို
နိပ်ပြီး မိမိအဆင်ပြေသလိုကြည့် နိုင်သည် သဘောကတော့ Zoon ပေါ့..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/10/2012 04:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကမ္ဘာပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့တွင်းကြီး ၁၀ ခု
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/09/2012 07:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/09/2012 04:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဆင်ခံ ၊မြင်းခံဘုရား ပြဿနာ
ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓအလိုကျ ဟုတ်/မဟုတ် တိုက်ဆိုင်ကြည့်သော မှတ်ကျောက်တစ်ခုရှိ၏ ။ ထိုမှတ်ကျောက်ကား-
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/08/2012 06:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကျွန်းကို ဦးသန့်ကျွန်းလို့ အမည်ပေးထားကြပါတယ်။
နယူးယောက်စီတီး Manhattan မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/07/2012 07:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘာ့ ကြောင့် ရခိုင်အရေးခင်းဖြစ်ရတာလည်းဘာ့ ကြောင့် ကြေးနီတောင်သပိတ်ဖြစ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ချေခန့် မှန်းရခက်သောသတင်းတစ်ခု
အောက်ပါသတင်းကို ဖတ်ပါကျွုန်ုပ်လည်းတိကျစွာ မပြောတပ်ပါ စာဖတ်သူများမိမိရဲ့ နေ့ စဉ်လေ့ လာသုံးသပ်ဖတ်ရှု့ နေသာ အင်တာနက်လိုင်းပေါင်းစုံမှ သတင်းများ၏
လေ့ လာချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး ဒီသတင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်ပေး
ပါလို့ပန်ကြားအပ်ပါတယ်..ကျွန်ုပ်လုပ်ကြံပြီးရေးသားတာမဟုတ်သလို...
ပုံများကိုလည်း သတင်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး လိုက်ဖက်အောင်ရှာဖွေတင်ပြပေးတာပါ...
Photo taken on Feb. 27, 2012 shows the Made Island project site in Rakhine state's
Kyaukphyu, Myanmar. Myanmar Vice President U Tin Aung Myint Oo on Monday spoke highly
ofaSino-Myanmar oil and natural gas pipelines project on Made Island, Rakhine state's
Kyaukphyu. The project is being implemented by the China National Petroleum Corporation
(CNPC) and related companies. The Myanmar vice president also said that he appreciated
the Chinese company's support for Myanmar's charity undertakings. (Xinhua/Jin Fei)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/06/2012 07:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြည်သူတွေ ငိုရင် ချော့ကာသိပ်လို့ 
ယုံတမ်းစာကားနဲ့ပုံပြောပြီး ကမ္ဘာကို စံနမူနာတင်ကာ
သွေးနီတောင်မှာ သက်သေပြခဲ့တာ ဒီဦးဇင်း။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/04/2012 09:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စင်္ကာပူမှJurong Shipyard သတင်းတို
ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေထဲ Jurong Shipyard မှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေရှိရင် ဖုန်းဆက်ပြီး သတင်းလေး မေးကြည့်ကြပါအုံး!!
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/04/2012 07:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဟစ်တလာဂန်းနားစတိုင်(Gangnam Style Hitler Ver.1 [Best Remix Version] )MP4ဗွီဒီယိုကြည့် ရအောင်
ယနေ့ အင်တာနက်လိုင်းပေါ်တွင် နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေသော အိုပါပါ ဂန်းနမ်းစတိုင် သီချင်း
လားဂဏန်းစတိုင်လားတော့ မသိပါဘူး....စတိုင်တွေကတော့ အများကြီးပါ အဲဒီအထဲက ကျနော်ဂေါ်လီဟာ
ဟစ်တလာဂန်းနမ်းစတိုင်...Mp4 ဟာသလေးသဘောကျလို့ ...ရှာဖွေကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်
ကြည့် လိုက်ကြဆို့ ...(ကိုဂေါ်လီဂဏန်းစတိုင်)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/03/2012 09:26:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နှစ် အတန်ကြာ နေထိုင်လျက် ရှိသည့် အဆိုတော် မာမာအေးသည် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် SilkAir လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုတော် မာမာအေး၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်မေချိုကပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/02/2012 04:11:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အဆိုတော်- ထူးအိမ်သင်၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ လေးဖြူ၊ မာရဇ္ဇ၊ အငဲ၊ ထွဏ်းထွဏ်း၊ မေဆွိ၊ မေခလာ၊ ကော်နီ၊ ပိုးဒါလီသိန်းတန်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 12/01/2012 06:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ယခုတလော တို့ မိးရှို့ မီးတွေအကြောင်း ကျနော်များများဖတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့် သိသင့်သိထိုက်လိုက်လို့ မိတ်ဆွေများကိုထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မဆိုင်လျင်တော့ အသိပေးပါရစေ .။ ဘေးမှာဘဲနေပေးပါ။ ဆိုင်ရင်တော့ဝင်ရေးနိုင်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/27/2012 04:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်စု ဘာဖြစ်လို့ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ လက်ထပ်တာလဲဆိုရင်
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးရဲ့ သမီးအနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ လက်ထပ်တာလဲဆိုရင် အဓိကအကြောင်းအရင်းက ပြည်ပမှာ ဘာ့ကြောင့် ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကို အရင်ထုတ်ရှင်းရပါမယ်.။ အမေစု မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ ၁၉၆၀ မှာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိန္ဒိယကို ပြောင်းရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေစု အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ ဆယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဒေလီတက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာနဲ့ သင်ယူနေတုန်း မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဗုံးခွဲခံရပြီး အထဲကကျောင်းသားအားလုံး သေဆုံးကုန်ပါတယ်။။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/27/2012 04:36:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သတင်းစာထဲက အမျိုးအမည်မသိ ဓာတ်လုံးကြီးဆိုသည်မှာ
၂၄-၁၁-၂၀၁၂ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ကောင်းကင်ထက်မှ အမျိုးအမည်မသိ အရာဝတ္တုများ သံဖြူ ဇရပ် မြို့နယ် အတွင်း ကျရောက် ဆိုသည့် သတင်းအား ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သတင်းအား မြ၀တီ ၀က်ဆိုဒ် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
သံဖြူဇရပ်တွင် ကျခဲ့သည့် ဓာတ်လုံး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/24/2012 11:53:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယခင်က အစ္စရေးတပ်မတော်သုံး galil rifle များကို အတုယူပြီးထုတ်လုပ် သည်ဟု ပြော ဆိုနေသော မြန်မာ့တပ်မတော်(Myanmar Army-MA)စီးရီး လက်နက်များ အထဲမှ လက်နက်ငယ်များအား တရုတ်နိုင်ငံတပ်မတော်သုံး QBZ ဒီဇိုင်းများဖြင့် ထွက်ရှိလာပါတယ် ။ ၄င်းQBZ များသည် Bullpup(မောင်းခလုတ် နောက်တွင်ကျည်အိမ်နှင့်မောင်းပြန်စစ်စတမ်တပ်ဆင်ထားသော)
သေနတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သေနတ်အား ရင်ခွင်ထဲပိုက်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေမည်ဖြစ်ပြီး သေနတ်ပြောင်းရမ်းခါမှူကို သက်သာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိရောက်မှူပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ လက်နက်ငယ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ အရာရှိ တစ်ဦး မှ ပြောပါတယ် ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/24/2012 06:33:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အနမ်းဇာတ်လမ်းအတွက် ကမ္ဘာ့အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ တုံ့ပြန်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား လာရောက် စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ ဆုံ ချိန် အိုဘားမားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အား ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ ကို ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် က လည်း ကြေနပ်ပြုံးပျော်နေခဲ့တာကြောင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အပ်စပ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ရန်ကုန်၊ ပဲခူးနဲ့ ညောင်လေးပင် မြို့နယ်များရှိ ပါတီဝင်ဟောင်းများမှ မကျေနပ်သဖြင့် ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ေ နကြပါတယ်။ NLD ပါတီနာယက ဦး ၀င်းတင်မှ ၄င်းကိစ္စ အား ပြေလည်ေ အာင် ဖြေရှင်း ချက် ပေး မည် ဖြစ်ေ ကြာင်း၊ နိုဝင် ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြမည့် ပါတီဝင်ဟောင်း များ နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး ဖြေရှင်း ချက် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ (မြန်မာရွှေမြေ)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/23/2012 07:40:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သံလွင်ဆီထိုးသွင်းပြီး ယောက်ျားပီသချင်ရာမှ ယောက်ျားဘ၀ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသား
ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသား တစ်ယောက်ဟာ ကြီးမား ရှည်လျားချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သံလွင်ဆီ ထိုးသွင်းပြီး ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ယောက်ျားဘ၀ပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ တယ် ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းက ဆိုပါတယ်.
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/23/2012 07:14:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/22/2012 06:11:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်နဲ့ အသက် မပြည့်သူနဲ့ နေလို့ ထောင် ကျတဲ့ ၁၅ ဦးမြောက် စင်္ကာပူ PR
အသက် မပြည့်သေးတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးနဲ့ ပျော်ပါး ခဲ့သူ စာရင်းကိုင် မန်နေဂျာ ဟောင်း စင်္ကာပူ PR တစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် အင်္ဂါနေ့မှာ ထောင် ၁၁ ပတ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ ရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/21/2012 05:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၄ မှာ သမ္မတ ဖြစ်မယ်”လို့ စံဇ...
Heavy metals and health သတ္တုလေး (heavy metals) တွေ...
စိန်ခေါ်မှုများ၊ အလားအလာများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်...
ခင်းဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ လူဆိုတာဒါပဲ မှတ်ထားကြပါ...
ကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၊ လူကြီး(၁၃)ဦး ဆေးရုံတင်လိုက...
တရုတ် နိုင်ငံ မှ ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထား သည့် ၀ြ...
တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးအတွက် Nike မှထုတ်သော သားရေကွင...
ဟင်းလျှာအဖြစ်ချက်စား ဆေးဖက်ဝင်သလားမမေးနဲ့ရုံးပတီ...
မြောက်ကိုရီးယား ဒုံကျည်လွှတ်တင်မှု နိုင်ငံတကာကို အြံ...
ရှာလကာရည်ဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ စစ်ဆေးသည့် နည်းလ...
ဘာ့ ကြောင့် ရခိုင်အရေးခင်းဖြစ်ရတာလည်းဘာ့ ကြောင့်ေ...
ဟစ်တလာဂန်းနားစတိုင်(Gangnam Style Hitler Ver.1 [Be...
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နှစ် အတန်ကြာ နေထိုင်လျက် ရ...
ဒေါ်စု ဘာဖြစ်လို့ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ လက်ထပ်တာလဲဆိုရင်...
မြန်မာ့တပ်မတော်ထုတ် လက်နက်ငယ်များ ပုံစံသစ်ဖြင့်ထွက...
အနမ်းဇာတ်လမ်းအတွက် ကမ္ဘာ့အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ တု...
သံလွင်ဆီထိုးသွင်းပြီး ယောက်ျားပီသချင်ရာမှ ယောက်ျား...
အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်နဲ့ အသက် မပြည့်သူနဲ့ နေလို့ ထော...